DF Somaliya oo ka qeyb galeysa Shirka Baarlamaannada dalalka Afrika ee Koonfur Afrika | HalQaran.com
S/Afrika (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya,mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka qeyb gali doona shirweyne ballaaran oo Tallaadada maanta dalka Koonfur Afrika uga furmaya afhayeennada baarlamaannada dalalka Afrika.
Shirkan ayaa looga doodi doonaa xaaladda ay ku suganyihiin qaxootiga iyo barakacayaasha Afrika iyo gacan siinta kuwa dib ugu noqonaya dalalkooda.
Ajandayaasha horyaalla shirka waxaa ka mid ah, horumarinta dadaallada dib u heshiisiinta dalalka ay cooladuhu ka jiraan ee Afrika oo gogol xaar wanaagsan u noqonaysa in la yareeyo tirada qaxootiga Afrikaanka ah iyo horumarinta xiriirka ganacsi iyo midka dhaqaale ee ay wadaagaan dalalka qaaradda Afrika.
Masuuliyiinta baarlamaannada Afrika ayaa la filayaa in ay si qoto dheer u lafa guraan xaaladda ay ku suganyihiin in kabadan 14 milyan oo qaxooti Afrikaan ah.
Dadka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka qaxootinnimada miciin biday, kaddib burburkii dowladdii dhexe ee dalka iyadoo ay jiraan qaxooti Soomaaliyeed oo wali ku sugan xereyaha qaxootiga dalalka dariska la ah Soomaaiya sida dalka Kenya iyo Itoobiya.
Dowladda Soomaaliya, Kenya, iyo hay’adda UNHCR ayaa weli wada dadaallo sadex geesood ah oo ay isaga kaashanayaan sidii qaxootiga Soomalida ee ku jira xeryaha qaxootiga Kenya looga gacan siin lahaa in si iskood ah ay ugu soo noqdaan Soomaaliya, dalkooda dib u dejin loogu sameeyo.